Ny ANP John de Mol, Fahazoan-dàlana momba ny fahazoan-dàlana, ny zon'ny mpamorona zana-bolana 2: Rosmalen Nedland Bailiffs BV: Martin Vrijland
Raha mampiasa fomba fitsaboana ianao John de Mol's ANP hita eto amin'ny tranokala, azonao atao ny manara-maso ny fomba amipian'ilay orinasa ny zon'ny fahazoan-dàlana Fahazoan-dàlana momba ny fanararaotana ireo sary amin'ny lahatsoratra. Efa namaky ny fanehoan-kevitra nataoko ihany koa ianao (jereo eto).
Amin'izao fotoana izao no misy antsika, fa i John de Mol's ANP no nanao ny biraon'ny mpiambina. Izany rehetra izany dia mandeha amin'ny alalan'ny Rosmalen Nedland vadintanin'ny BV nandray ny mailaka amin 'ny alalako dia mampiseho fa maro kokoa ny olona mijaly noho ny filazana sy ny toy izany fa misy fialam-boly mihitsy aza ny mpamaham-bolongana dia nanaisotra ny tranonkala tanteraka noho ny tahotra ny fanambarana. Ny hafa dia mifarana amin'ny fitakiana lafo. Raha toa ka lasa mpikambana ianao amin'ny endriky ny mpikambana iray manokana dia afaka miditra ianao ity lahatsoratra ity vakio ny fomba nahitako vahaolana iray mba hisorohana ny fanambaràn'ny mpilamy avy any John de Mol. Mazava ho azy fa tsy azontsika atao ny manome tsiny an'i John mahantra noho ny fampiharana azy ireny. Mazava ho azy fa mila mihaino tsara ny ankizy madinika ianareo.
Vakio ny taratasy voalohany noraisiko avy amin'ny Governemanta Rosemalen Nedland eto:
Ho hitanao ny fanehoan-kevitra amin'ity taratasy voalohany avy amin'i Rosmalen Nedland ity ity rohy ity. Mazava ho azy, i Rosmalen Nedland, mpila ravinahitra John dia tokony hampiseho fa manohy ny fanao an-tsokosoko izy ary afaka manisa azy ireo hanohy. Naharay taratasy faharoa aho avy eo:
Mazava ho azy fa namaly izany aho. Vakio amin'ny tenanao manokana:
Tsy mahita anao aho amin'ny zavatra ataonao na ny an'ny ANP. Voalohany indrindra, nisy tolokevitra iray natao tamin'ny Fahazoan-dàlana Permiss. Ny soso-kevitra iray dia mamela efitrano fifanakalozana, saingy ny taratasinao dia maneho indray fa tsy manolotra ity toerana ity. Ankoatr'izany, raha misy fialantsiny amin'ny soso-kevitra, dia vita ny famintinana avy hatrany fa ny safidy 1 ihany sisa, dia ny hoe azo ambara ny totaliny. Tsy nanaiky ny volavolan-kevitry ny Fahazoan-dàlana aho ary tsy mbola manao izany.
Eritrereto aho handefa soso-kevitra iray ary handà ity tolo-kevitra ity aho na hanolotra fanolorana mifanohitra; moa ve aho manome zo ahy hitaky avy hatrany ny soso-kevitra voalohany? No. Avy eo dia tokony tsy nantsoiko hoe tolo-kevitra aho. Tolo-kevitra momba ny fifampiraharahana. Izany no famaritana ny teny hoe 'tolo-dalàna'.
Tsy mbola misy Fantatr'i lalàna izay dia ahafahana manamarina ny fitondran-tena ny ANP na milina Fanomezan-dàlana, raha tsy izany aho dia tsy nampiasa ihany ny sary mba hanazavana ny lahatsoratra. Raha nilaza tamiko ny ANP na ny Fahazoan-dàlana aho fa misy zo hampiasa ireo sary, dia mety ho nanao fihetsika vao haingana aho. Etsy andaniny kosa, tsy mbola nisy na inona na inona efa nandre izany fitarihana izany nandritra ny taona maro. Raha efa naheno fehezan-teny iray teo amin'io lalana io aho, dia azo naverina ny famerimberenana. Izany dia niantoka fa, noho izany, raha ny marina dia tsy nisy afa-tsy fiheverana iray monja. Ny ANP sy ny Fahazoan-dàlana (Machine Permis), etsy ankilany, dia toa nanemotra tamim-pahavitrihana ilay tranga ary najanony izany raha tsy nisy sary maromaro nampiasaina "tsy ara-dalàna". Vokatr'izany, ny trangan-javatra rehetra dia niharan'ny fanilikilihana azo antoka, izay niandry hatramin'ny vola an'arivony tapitrisa no azo lazaina.
I mangataka fa mahafoana ny milaza sy maneho zotom-po sary izay zo hanala fitsaharana, fa manao fangatahana fa ianareo sy Fanomezan-dàlana Machine, tahaka ny ANP, izany endriky ny hitsahatra an-keriny. Ny hetsika tsotra natao tamin'ny fampahalalana ara-potoana momba ny fitsipika dia ampy mba hisorohana ny fanitsakitsahana marimaritra iraisana. Ny olona iray voamarina dia mitaky roa. Na dia izany aza dia tsy nampitandremana akory. Tsy nampiseho na inona na inona ny ANP na ny Fahazoan-dàlana. Tsy mpisolovava aho ary noho izany dia tsy afaka manantena ny hahafantarako ny ampahany kely na ny fitsipika avy amin'ny lalàna marobe sy fitsipika amin'ny fo. Nanomboka nanoratra lahatsoratra ho mpilalao am-pirahalahiana aho indray mandeha ary tsy nahazo fampiofanana momba izany, noho izany dia fanehoan-kevitra tsy miangatra no andrasako fa tokony ho nahafantatra izany aho. Afaka nahafantatra izany rehetra izany ianao raha efa namaky ny tranokalako.
Mitazona ny fepetra ny hanafoana ny fanambarana sy ny filazana rehetra ary koa mitazona ny fepetra takiana nomenao ahy noho ny fandaniana ahy. Ianao, ny ANP ary ny Fahazoan-dàlana dia mamaritra koa ny tahan'ny ny anao ary tsy mamela toerana ho an'ny fifampiraharahana. Izany koa dia mampihatra ny lalana hafa; na manohitra izany ianao na tsia. Raha te-handamina izany ianao, dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny famoahana ilay fitakiana. Tsy maintsy amporisihako aminao ny soratra rehetra izay ataoko amin'io fotoana io (toy izany koa ity soratra ity). Ity farany dia tsy soso-kevitra ary noho izany dia tsy manome toerana ho an'ny fandavana na fifampiraharahana.
Famaranana: raha manaisotra ny fangatahanao ianao ary manakana ny fanao azonao atao, dia hesoriko avy hatrany ny sary rehetra. Asa goavana be izany satria tsy afaka nahita fotoana noho izany antony izany aho, satria mila mihady mafy loatra aho ao amin'ny tahirin-tsariko mba hamantarana ireo sary ary hanala azy ireo amin'ny tanana. Hanainga izany fotoana izany aho raha vao mijanona ny fanafody azonao amin'ny anaran'ny ANP. Manery ahy ho lasa akanjo goavam-be iray izay tsy te-hanao na inona na inona aho. Tsy tiako ny tsy maintsy hiatrehana ireo hetsika tsy ara-dalàna ireo dia i John de Mol, na ny anao. Atsaharo avy hatrany!
Izay nanadino lazaina amin'ny mailaka ity dia Rosmalen Nedland ny nasty fa hevi-petsin'i azo ampiharina ao amin'ny mailaka farany, izany hoe amin'ny alalan'ny mifandray ny unaddressed taratasy avy amin'ny ANP izay maneho fa ny ANP efa nampitandrina tokoa ho fampiasana sary izay hizaràna lisansa. Io tarehin-tsoratra tsotra io dia tsy voafatotra ary tsy misy dikany izany. Eto ve isika no manatri-maso ny hafetsena hafahafa sy ny famitahana ho amin'ny famonoan-tena? Nandefa azy ireo PS-izaho fotsiny aho. Jereo eto ny fanamarihana tsy misy anarana:
Afaka milaza isika fa io no David - Goliata ady eo amin'ny tanteraka simba sy marim-pototra sy ny fanendrikendrehana opprobrious voaloto Martin Vrijland sy ny miliaridera sy manan-karena indrindra volksbeïnvloeder Holandy, John De Rol. Miangavy anao aho hanohana ahy amin'ny maha-mpikambana ahy, satria mihamitombo hatrany ny tsindry ary tsy mahomby intsony; Amin'ny ampahany noho izany karazana fampiharana izany. Misaotra betsaka anareo noho ny fanohananareo!
ANP dia mandefa taratasy matevina amin'i Martin Vrijland noho ny sary momba ny zon'ny mpamorona
Tags: ANP, fianakavian'ny mpanjaka, Fitarainana, Featured, sary, sary ampiasaina, john de mol, lisansy fahazoan-dalana, Martin Vrijland, fahaleovan-tena
18 Septambra 2018 ao amin'ny 20: 09
Jaona, fantatro fa mety ho lafo be ny fitsaboana botox anao ary ny zanakao dia maniry zavatra mihoatra noho ny menaka manitra ao amin'ny sandwich, saingy tsy mandeha lavitra ve ianao ankehitriny?
18 Septambra 2018 ao amin'ny 20: 19
Eny, niantso an'i Talpa aho nandritra ny fotoana kelikely mba hahazoana an'i John amin'ny finday, saingy toa tsy sahy mitaraina izy, na dia mangataka fangatahana amin'ny sekreterany aza.
18 Septambra 2018 ao amin'ny 20: 16
Ao amin'ny kapila.
Ry Mr Vrijland,
Mazava ho azy fa hanohana anao aho, ary ho azoko antoka fa ny henatra rehetra dia manjavona eo an-tsorokao.
marina ny anao, I ANP, Antie Anarana Antoko mankany manokana mba hahazoana antoka fa tsy dia hisy fiantraikany ny haino aman-jery holandey sy ny olona milaza fa misy ihany koa ny vohikala misy toy izany.
Noho izany dia efa nandray fepetra henjana aho, efa nifanerasera tamin'i Mr. R de Vries, izay nandona ny rahavaviko, ka azo antoka fa azo antoka, raha mandefa ahy ny kaontinao banky izahay dia namana tsara.
Fisaorana avy any Blaricum.
18 Septambra 2018 ao amin'ny 20: 21
Misaotra an'i John,
Endrey ny famoahana nahafinaritra!
Afaka mahazo ny botox aho amin'ny farany
18 Septambra 2018 ao amin'ny 20: 24
Ny antsipiriany Saillant momba ny fifandraisana am-pirahalahan'i Linda sy i Peter R. de Vries dia tsy mahaliana ahy toy izany, fa mankasitraka ny fihetsikao goavana!
18 Septambra 2018 ao amin'ny 22: 08
Tsy isaorana, handeha ho an'ny tanindrazantsika isika.
19 Septambra 2018 ao amin'ny 13: 00
Miorena tsara! Social Data Nederland sy de Mol androany ho an'ny mpitsara
« Fotoana ho lasa cyborg tena izy!
Ny andrana manaraka ao amin'ny Nicky Verstappen - psyop Jos Brech? Nahitana sary vetaveta ankizy! »
Total visits: 12.919.320